SA’AATII 05:00ffaa (AM) … QABSOO OROMOO – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSA’AATII 05:00ffaa (AM) … QABSOO OROMOO
SA’AATII 05:00ffaa (AM) … QABSOO OROMOO
SA’AATII 05:00ffaa (AM)… QABSOO OROMOO
SEENAA Y.G (2005), Caamsaa 4, 2018
Naqamte: Caamsaa 4, 2018 – FXG Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Siyaasaan ega irra’annee bubbuullee jirra. Amma Wayyaanee nuutuu oofaa jira. Waan gaafannee guutaa jirtii malee, waan nu gaafattee guutaa hin jirru. Hojii manaa dhiigaan isaaniif kenninee, akka deebisaniif isaan dirqaa jirra. Nama haaraa muuddataniif yeroo laanneerra. Haalli jiru daandii gaariirra hin jiru. Qabsoon Oromoo kanarra afuura fudhannaan, tarii afuurri fudhatuu kan caalaatti isa dadhabsuu ta’uu danda’aa. Kanaaf dammaquu fi warraaquu isa barbaachisa. Kana jechuun dantaa keenya ariifachiisuuf ta’uu beekuun barbaachisaadhaa. Wayyaaneen yeroo bitachuu fi sochii qabsoo Oromoo gidduutti qaawwaa uumuuf abbaalaa jiraachuun ifaadhaa. Kanaaf Qabsoo keenyaatti deebinee waan barbaannuu dhiiga keenyaan mirkaneeffachuutu furmaata ta’aa. Sirna adeemsa Wayyaanee keessatti, rakkoolee fi mallattooleen mul’achaa jiran, tarii yoo ofiiisaaniitiin kan dhohaan ta’ee, wareegama ulfaataa nu baasiisuu malu. Kanaaf waa hundaa akka nuuti barbaannuutti gaggeeffachuuf, hojii kenyaaitti fufuun, isa silaa Wayyaanee keessaa ka’uus human dhabsiisuun barbaachisaadhaa.
Yaada Tigirootaa :–Tigiroonni wanni yaadaa jiran gonkumaa akka nuuti yaannuu ta’uu hin danda’uu. Keessaa fi alatti rakkoo mataa isaanii qaban. Isaan giddutti wal amantaa fi garaagarummaan adeemsaa umamaa jira. Kanaaf kun bakka tokko tokko angoorra ka’uu isaanitti dabalatee waan hin yaadamnee uumuu danda’aa. Yeroo waan kun dhalatutti OROMOOn gonkumaa carraaa laachuufii hin qabuu. Kanaaf waan jiru jabeessanii itti deemanii bakka itti dhiphisuutuu dansaa ta’aa
Dr. Abiyyi waan hundi itti dhaphachaa deemuutu itti fufa. Isa booda waan silaa gochuuf yaade yoo jiraate, dubbii kaasurra hafuu wayyaa jedhee dhiisutti ce’aa. Tigiroonni Abiyyiif gonkumaa afuura hin kennaniif. Akkasumaan hojiin sardanii hojiin ala isa taasisuu. Kanaaf waadaan gama hundaan seenamaa jiruu waan fiixaan ba’uu hin fakkaatuu.
Inni sadaffaan wal sukkummaa siyaasaa keessa Ummata gama dingdeen miidhamuu danda’utu jira. Ammatti Itophiyaan gama Dingdeen haala hamaa seenteetti. Abbootiin qabeenyaa Biyyakeessaa fi alaa gama hundaan rakkoo hammaata keessatti kufanii jiran. Kanaaf yoo waadaa seenamee eegnaa ta’ee, rakkoo Ummata keenyarra gama kanaan dhaqabuu danda’uu hammeessuu ta’aa. Kanaaf Qabsoo Finiinsuutuu furmaata ta’aa.
Barii jala dukkanni hammaataadhaa. Qabsoon Oromoo amma sadarkaa kanarra jira. Dukkana keessa dhaabbatanii dukkana isa keessa dabran hin hawwan. Barii sa’aa muuraasa booda abdatanii itti tarkaanfatu. Qabsoon Oromoos akkas ta’uu qaba. Dukkana kana keessatti wayyaanee yoo hin rukutiin yoomillee, eessattillee hin rukunnu. Kun carraa keenyadha. Halli Wayyaaneen keessa jiru haalaan hammaataa dhaa. Yeroo akka dhaban kanatti rukutuu fi itti jabaachuu nu barbaachisa.
Qabsoo keenya kana keessatti amma gufuu guddaan OPDO dha. OPDO kanaaf carraa kana caalaa laachuun barbaachisaa miti. Uruursuun barbaachisaa miti. Waajjira OPDO ka dhaabbatummaa hundaa barbadeessuun akeekkachiisa jalqabaa itti kennuudha. Waajjira dhaabaa OPDO Oromiyaa keessaa barbadeessuudhaa. Isa booda bulchiinsatti ce’uudhaa. Wayyaaneen irratti of gattee kan Oromiyaa keessa fandalalaa jirtuu OPDO qabatteetii kana caalaa waan itti himnu hin qabnuu.
Dhaabbiilee investimantii Wayyaanee … hojii akka dhaabaniif qofaa qaamoota kubbaaniyyoota isaanii ijoo ta’aan rukuchuudhaa.
Dhaabbilee Investimantii fi dhaabbilee garagaraa Biyyootaalaa:–kanneen faayidaa isaanii fageenyaan ilaalachurraa, akka hojii dhaaban gochuun ni danda’ama. Humna ibsaa fi kkf irraa dhaabuun ni danda’ama.
Madda Humna Fedaraalaa ta’ee hundaa Oromiyaa keessaa dhabsiisuun ni danda’ama. Guutummaatti Oromiyaa keessatti Alaabaa Fedaraalaa kaasuu fi waajjiraalee Fedaraalaa hojii dhorkuun itti fufu qaba.
Walumaagalatti Qabsoon Oromoo ka duraa irra human qabaachuu fi ergaa inni qabuus hedduu kan hadheeffatee ta’uu barbaachisa. Waan eegalamee itti fufu qabaa. Sochiileen jiran godinaa godinaatti garaagarummaa qabaatee, akkaataa bobbaa waraanaa gufachiisuunis barbaachisaadhaa. Kanaaf gama hundaan haa jabaannuu. Teessuuma Tigirootaa Oromiyaa keessaa adda baafatanii nagaan obbolaa isaanii akka nurraa dhaaban itti himuu fi garaa jabaachuu keenyallee itti dhaamun barbaachisaadhaa. Inni xumuraa Injifannoo olaanaa nu goonfachiisaa ka jiru, Lammii kamirrattuu rakkoon akka hin dhaqabnee itti fufudhaa. Hinari’iin. Garuu akka deemuu taasisuu baradhuu jedhuu warri haasaa beekan.
HORAA BULAA !!!
Bofa Lafa Jiru Ulee Harka Jiru!
Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 5 May 2018
Kani dandeessuu dhaali jennaani go’wani galeetu niti dhanee jedhu. OPDO keessaa oboleessa fi obbooletikeetu keessa jira. Kana wali loolu jalqaabu jechuuni walfixuu akkaa gowwaa jechudhaa.
Ottoo ta’ee waligaalameetu waayyaane uffiira ittisu male walittii deb’uuni hin faayadu.
Dachas Mohammed says:
Kun hunduu ta’uu kan danda’u mooraan QBO Tokko ta’uun dirqama.haala ammaa “jaarmootiin OROMOO kan maqaan qilleensarra jiran hojiin lafarra hin jirre” walitti duulanitti ,akkuma kaleessaa carraa ummata oromootti kan fayyadamu humnoota biraa ta’a.
Well farsighted idea. This idea might be seen by someone who able to see what is going to happen in the future, not what is going on at this moment. For most of those who think the game is over, do not full your mind. Woyane is still alive. They are regrouping and trying to regain power believe it or not. Organized resistance is not harmful to the current political situations including PM Abiy success. It is important to end the tranny. You cannot leave alone wounded pig. It is going to bite you. Be smart in politics.
Abaltii Gillo says:
Akka ani ilaaluu ittii Naamussa fi uffii egganoon humnoota dimokraassi,mirga ilma Nama kabajjanif Oli antummaa seera barbaddan hunda wajjinin Wayyanne irratti dulluun barbachiisa fi kan irratti hojjetamu qabbuu dhaa.